Ardayda soomaaliyeed ee jaamacadaha Göteborg dhigta oo shir isugu yimid | Somaliska
Ardayda soomaaliyeed ee jaamacadaha Göteborg dhigta oo shir isugu yimid
Maalintii shalay aheyd ayaa magaaladda Göteborg waxaa ka dhacay shir ay iskugu yimaadeen ardeyda soomaaliyeed ee dhigta jaamacadaha kala duwan ee magaaladda Göteborg ee caasimadda labaad ee dalkaan Iswiidhan.
Shirkan oo uu soo qaban qaabiyey urruur ardayadeedka “somaliska akademiker”, ayaa waxaa ka soo qeyb galay arday kala duwan iyo qaar horey jaamacadaha uga baxay. Kuwaas oo munaaqishoonayaan doorwka waxbarasho ee dhalinyaradda soomaaliyeed ee dalkaan Iswiidhan iyo sida uu u yahay mid aan muuqan marka la bar bar dhigo ajaanibta kale ee dalkaan iyagana ku nool. Ardayadan ayaa isla qaadaa dhigay sida ka aqoonyahano ahaantan haatan bulshaddu ku xisaabtameeyso ay u dhiiragelin karaan dhalinyaradda soomaaliyeed ee dalka kula nool una noqon lahaayeen tusaale quruxsan.
Faadumo Cali oo ka mid ah ardeyda hormuudka u ah urrurkan ayaa mar ay somaliska.com u warameeysay sheegtay in ujeedada loo sameeyey urrurka tahay siddii ay xarrun ugu noqon lahayd aqoonyanka soomaaliyeed ee dalkaan, islamarkasina ku kala qaadan karaan fikradaha iyo sida loo horumarin karro aqoonyahanadda soomaalida gaar ahaan kuwooda da’da yar.
Faadumo waxaa ay sheegtay in kastoo urrurkoodu yahay mid hadda bilow ah hadana ay ku camal jiraan siddii aqoonta ugu wacyi gelin lahaayeen dhalinyaradda iyaga ka weecday aqoonta. Waxaana iyadoo ku hal qabsaneeysa xigmaddii aheyd “Aqoon la’aan waa iftiin la’aan” ay farta ku fiiqday in dhibaatooyinka dhalinyaradda soomaalida heeysta ay qeyb ka tahay aqoon darradda heeysata.
Ugu dambeyntiina ardeydan oo arrimo badan ka munaaqishooday ayaa isla gartay muhiimadda ay aqoontu leedahay, lama huraana ay tahay sidda dhalinyaradda soomaaliyeed uga dhex muuqan lahaayeen iskuuladda iyo jaamacadaha, taas oo fursad u siineeysa ineey horumariyaan noloshooda iyo ka bulsho soomaaliyeed ahaan.
Faadumo waxaa ay sheegtay in dhawaan qaban ay doonaan barnaamij weyn oo aqoonta looga hadlayo kaas oo ay ka soo qeyb geli doonaan dhamaan ardeyda dhigata jaamacadaha dalka. Kulankan ardeyda jaamacadaha Göteborg iyo nawaaxigeeda dhigta ayaa ku soo dhamaaday jawi wanaagsan rajo iftiinka aqoonta ah oo ay doonayaan ineey tiigsadaan.
SFI oo la doonayo in shirkadaha ay bixiyaan [Video]